ဒူဒူကြီး: Flow metering - Variable area flow meter
variable area flow meters တွေကို၊ တခါတရံ 'rotameter' လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ variable area flow meters တွေမှာ၊ ပါဝင်တဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းကတော့၊ vertical tapered bore tube နဲ့ float တို့ဖြစ် ပါတယ်။ vertical tube ရဲ့၊ အောက်ခြေပိုင်းကို tapered ပုံသဏ္တွန်၊ small bore အနေနဲ့ တည်ဆောက် ထားပြီး၊ tube ထဲရှိ fluid အတွင်း၊ float ဟာ၊ အထက်အောက်ရွေ့လျှားပါတယ်။
Fig. Variable area flow meter installed inavertical plane
tube အတွင်းမှ float position ဟာ၊ fluid ရဲ့ dynamic upward force နဲ့ float ရဲ့ mass ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ downward force တို့ကို equilibrium ဖြစ်စေတဲ့အတွက်၊ float position ပြောင်းလဲရွှေ့လျှားမှုမှ တဆင့်၊ flow rate ကို၊ indicating အနေနဲ့ဖော်ပြပါတယ်။
တတ်ဆင် အသုံးပြုတဲ့ float ဟာ၊ certain weight ဆိုတဲ့ သိသိသာသာ အလေးချိန်ရှိတဲ့ float ဖြစ်ပြီး၊ chemical resistance float လည်းဖြစ်ပါတယ်။ float အဖြစ် SS 316 လို့ခေါါတဲ့၊ grade 316 stainless steel material ကိုအသုံးပြုသလို၊ တခါတရံ application ပေါါမူတည်ပြီး၊ Hastalloy C, Aluminium နဲ့ PVC material တွေ ကိုလည်း၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Variable area flow meter
glass နဲ့ plastic လို၊ transparent tube အကြည်တွေကိုသုံးတဲ့အခါ၊ float ရဲ့ ရွှေ့လျားမှုကို အပြင်ဖက်မှ မြင်ရတဲ့အတွက်၊ scale မှတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ higher temperature applications တွေမှာတော့၊ opaque ဆိုတဲ့ အလင်းမပေါက်နိုင်တဲ့ translucent materials တွေကို အသုံးပြုထားပြီး၊ tube ရဲ့အပြင်မှာ magnetic device ကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ float ရွှေ့လျားတဲ့အခါ၊ magnetic device ဟာလည်းလိုက်ပါရွှေ့လျားပြီး၊ flow rate ကို၊ magnetically coupled indicator မှ တဆင့်ဖတ်ယူပါတယ်။
tapered bore အတွင်းမှာ၊ float ကိုထည့်သွင်းထာတဲ့အတွက်၊ fluid ဝင်လာတဲ့အခါ၊ float ဟာ upward direction နဲ့ရွှေ့လျားသလို၊ float နဲ့ tube အကြားမှ၊ pass area ဖြစ်တဲ့၊ annular area ရဲ့အရွယ် အစားဟာလည်း၊ ကြီးမားသွားတဲ့အတွက်၊ differential pressure အနေနဲ့ constant နီးပါးရှိနေမှာဖြစ် ပါတယ်။
variable area flow meters တွေဟာ၊ linear output ကိုထုတ်ပေးပြီး၊ turn- down ration အနေနဲ့ (10:1) ခန့်ရှိပါတယ်။ တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ အကြမ်းခံသလို၊ fluid flow မှာ၊ minimum pressure drop ကိုသာဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ variable area flow meters တွေကို၊ flow rate indicating ထက်၊ flow movement indicating အတွက်သာအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်၊ flow measuring devices အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ gas metering နဲ့ laboratory applications တွေမှာ၊ variable area flow meters တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 04:14